४८ सयको खाना खाएर १६ लाख टिप्स ! - नागरिक रैबार
४८ सयको खाना खाएर १६ लाख टिप्स !
अमेरिकाको न्यु ह्याम्पशायरमा रहेको एउटा रेष्टुरेन्टमा खाना खानका लागि आएका एकजना ग्राहकले झण्डै ३८ डलरको बिल प्राप्त गरे । तर जम्मा ३७.९३ डलरको बिल चुक्ता गर्नुपर्नेमा उनले थप १६ हजार डलर टिप्ससहित कुल १६ हजार ३७ डलर ९३ सेन्ट रकम भुक्तान गरे ।
लण्डनडेरीस्थित स्टम्बल इन बार एण्ड ग्रिल नामक रेष्टुरेन्टमा आएका ती पाहुना त्यहाँ खासै आइरहने मानिस पनि होइनन् । तर पछिल्लोपटक आएको बेला उनले हटडग, ककटेल र तारेको अचार अर्डर गरे ।
ती ग्राहकले क्रेडिट कार्डबाट बिल तथा टिप्स भुक्तानी गरेका थिए । उनले कार्डबाट रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा रेष्टुरेन्टका कर्मचारीलाई तीनपटक भनेका थिए ः यो सबै रकम एकै ठाउँमा खर्च नगर्नु ।
त्यसपछि उनले भुक्तान गरेको बिल पल्टाएर हेर्दा १६ हजार डलर टिप्स दिएको देखियो । त्यसमा विश्वास नलागेपछि उनलाई यो के गरेको भनेर सोधियो ? त्यसको जवाफमा उनले आफूले जानीबुझी १६ हजार टिप्स दिएको बताए । उनले जवाफ दिए – तपाईंहरुसँग यो रकम होस् भन्ने मेरो चाहना छ । तपाईँहरु अझै कडा मिहिनेत गर्नुहोस् ।
त्यसदिन रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरु निकै भाग्यमानी रहेछन् । रेष्टुरेन्टको नियम अनुसार कुनै पनि दिनको टिप्स त्यसदिन कार्यरत कर्मचारीहरुबीचमा बाँडिँदो रहेछ । त्यसैले त्यो रकम त्यसदिन कार्यरत ८ जना कर्मचारीहरुबीच बाँडियो । केही रकम चाहिँ भोज गर्नका लागि छुट्टाइएको छ ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउने प्रयास
बैतडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २ जनाको सनाखत, घाइतेको नाम खुल्यो